သူမရဲ့ ဆံပင်ကို သိန်းရာချီနဲ့ လာဝယ်ရင်တောင် မရောင်းပါဘူးဆိုတဲ့ ဆံပင်ရှည်လေးနဲ့ မြန်မာဆရာမလေး – Aung Par Say
သူမရဲ့ ဆံပင်ကို သိန်းရာချီနဲ့ လာဝယ်ရင်တောင် မရောင်းပါဘူးဆိုတဲ့ ဆံပင်ရှည်လေးနဲ့ မြန်မာဆရာမလေး
June 17, 2020 September 8, 2020 admin
မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှုကို ထိမ်းသိမ်းတဲ့အနေနဲ့ သူမရဲ့ ဆံပင်ကို သိန်းရာချီနဲ့ လာဝယ်ရင်တောင် မရောင်းပါဘူးဆိုတဲ့ ဆံပင်ရှည်လေးနဲ့ မြန်မာဆရာမလေး
ပရိသတ်ကြီးရေ မြန်မာလူမျိုးတွေမှာ စကားပုံလေးတွေရှိကြပါတယ်နော် မိန်းမတို့ဘုန်း ဆံထုံး…ယောက်ကျားတို့ဘုန်း လက်ရုံးဆိုတဲ့ စကားလေးကို ကြားဖူးကြမှာပါနော်….မိန်းကလေးတွေရဲ့ အလှကျက်သရေဟာ သူမရဲ့ ဆံကေသာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုချင်တာပါ….
ခုခေတ်မှာလည်းပဲ တခြားနိုင်ငံက ယဉ်ကျေးမှုတွေ ထွန်းကားလာနေတာမို့ မြန်မာဆန်ဆန် ဆံပင်ရှည်လေးနဲ့ကျက်သရေရှိတဲ့ မိန်းကလေးဆိုတာ ရှိတော့ ရှိတယ် ရှားသွားပြီလို့ ဆိုရမှာပေါ့နော်….
ခုဖော်ပြမဲ့ မြန်မာမလေးကတော့ ဆံပင်အရှည်ကြီးထားပြီး မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းသူလို့ ဆိုရမှာပါဘယ်လောက်ထိတောင် ထိန်းသိမ်းလည်း ဆိုရင် သိန်း ၁၀၀ ပေးတာတောင် မရောင်းဘူးလို့ ခုလိုလေးလူမှုကွန်ရက်မှာ ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်….“ရောင်းမလား ခဏခဏလာမမေးပါနဲ့။တစ်ကိုယ်လုံးမှာ ဆံပင်ကအသက်မို့ သိန်း၁၀၀ပေးတောင် မရောင်းပါဘူးနော်။
သိဖို့” ဆိုပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဆံပင်အရှည်ကြီးနဲ့ ပုံလေးတွေနဲ့အတူ မျှဝေထားတာပါဒီဘက်ခေတ်မှာ ခုလို စိတ်ဓာတ်ရှိရှိနဲ့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းတဲ့ မြန်မာမလေးကို ချီးကျူးစားလေးတွေဆိုခဲ့ကြပါအုံးနော်…
Source ; May Thuzar Linn
← ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ဦးဝင်းမြိုင်ရဲ့ တစ်ချိန်က ဒု- ရဲအုပ်ဘ၀ ခံစားချက်များ
လူပျိုကြီးခန့်စည်သူမှာသမီးလေးတယောက်ရှိနေတဲ့အကြောင်းဖော်လိုက်တဲ့ ဟန်ငြိမ်းဦး →